China XY-1510G Antique Brass yatywinwa wocingo kwemveliso kunye Factory | Shuolong
XY-1510G Antique Brass ngumaleko wocingo
I-XY-1510G- i-mesh yentsimbi ibethelelwe kwifenitshala, kwaye indibaniselwano yentsimbi yobhedu yakudala kunye nesakhelo somthi senza uyilo ngokubanzi lwefanitshala lube yinto entle ngakumbi.
Material: Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ububanzi beFlat: 1.5 × 3.5mm
Indawo ephantsi: 10mm
IiNombolo eziCwangcisiweyo: 1
Ubunzima: 8.6kgs / m2
Indawo yokuvula: 42.2%
Ubunzima beMesh: 3mm
Umphezulu weNgcaciso: I-Antique Plated
Ububanzi bobubanzi: 1.5m
Ubude beMax: 3.0m
Umnatha wensimbi ungasetyenziselwa ukuhombisa ifanitshala, kwaye uninzi lwentsimbi yobhedu yakudala isetyenziswa njengomnyango wekhabhathi. Iphaneli enemingxuma yesinyithi engenasici isetyenziselwa ngakumbi iibhegi zezihlangu kwiivenkile ezinkulu. Ngokukhanyiswa kwezibane, kuyaqhubeka ukuphucula umgangatho wempahla kunye nesitayile esipheleleyo sevenkile.
Ngaphezulu, ukuba ufuna ukongeza izinto zoyilo lwesinyithi kwiiprojekthi zakho eziqhubekayo okanye ezizayo, nceda unxibelelane nathi ngokuthe ngqo. Ukongeza kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso aphambili, sinokubonelela ngeenkonzo ezenziwe ngokwezifiso kunye nezisombululo zofakelo lweNkqubo yakho yeeprojekthi.
Ukupakisha kwe-1.Ukunyanzeliswa kakhulu kwimingxunya yokwakha, ukupakisha okuhle kunokukhusela ngokufanelekileyo iimveliso zokufumana umnatha kumthengi ngokutyibilikayo.
Ngokweentlobo ezahlukeneyo zomnatha, ubungakanani kunye neempawu, i-SHUOLONG yenza iphakheji elungileyo ye-odolo nganye. Iziko leenkonzo malunga neemfuno zokufumana.
2.As malunga nendlela yothutho, sinokubonelela ngeenkonzo zokubonisa zamanye amazwe, ezinje nge-TNT, i-FedEx, i-UPS, i-DHL, njl njl, kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokuhamba ngolwandle.
1) iiPC nganye ukupakisha iphepha, 1-5pcs kwibhokisi yeplanga;
2) ngentando imfuneko sakho.
Iimveliso zensimbi ze-Hebei Shuolong. yimveliso ekumgangatho ophezulu wase China womluki wentsimbi ephothiweyo kumzi mveliso wezokwakha kunye nezamashishini. Ingasetyenziswa njengeeFacade zangaphandle, iiBalustrade, iZinyuko zokufaka kunye neZikrini, Izikrini zeLanga kunye nophahla, ii-Interiors, amakhethini e-Metal, ukwahlula kwamagumbi, njl.
Singaluka umgangatho ophezulu, owahlukileyo umnatha woyilo olungiselelwe ngokugqibeleleyo iimfuno zakho zeprojekthi. Ngolwazi olunemvelaphi encinci kwiindidi zentsimbi, ububanzi beengcingo, i-pitch kunye ne-crimping, unokunxibelelana ngokulula nathi malunga nento oyifunayo ukuze wenze ufakelo lwakho lwe-mesh lusebenze ngokugqibeleleyo nalo lonke uyilo lwakho. Nokuba ujonge uyilo olulula okanye oluqhelekileyo, olukhulu okanye oluncinci, siyalixabisa ithuba lokuba yinxalenye yeprojekthi yakho elandelayo!
Njengomvelisi wocingo olunesiqingatha senkulungwane, i-SHUOLONG inesikhundla esaneleyo sokulawula umgangatho we-odolo nganye. Kwaye kwangaxeshanye, singabanini beendleko ngokuthe ngqo zeemveliso zetambo. Senza umnatha wocingo kuphela, siyingcali!
Amava eminyaka eyi-40 : Ngaphezulu kweminyaka engama-40 yamava okuvelisa umnatha.
Isiqinisekiso 2 somgangathoUmyalelo ngamnye uvavanywa kwaye ulawulwa ngokungqongqo ngokwemigangatho ephezulu kunelinye ilizwe.
3.Ukufakwa & Izixhobo: Sinokubonelela ngezisombululo zocingo kunye nezincedisi zakho
Ukuba ufuna uku-odola okanye ufuna ukwazi iinkcukacha ezithe kratya zentsimbi yethu, pls thatha umyalezo wakho kwiwebhusayithi yethu, usitsalele umnxeba okanye uthumele iimfuno zakho kwi-imeyile yethu, uya kukuphendula ngaphakathi kweeyure ezingama-24!
Edlulileyo: I-XY-1513 Screen yolukiweyo yeMesh Screen
Okulandelayo: I-XY-3833 yokwakha i-Facade Mesh
Wocingo loYilo loYilo
Wocingo Mesh Ilaphu
Abaluki wocingo Suppliers
XY-3150G Antique Brass enemingxuma Screen for Wine Cab ...
XY- C1 Antique Brass Metal enemingxuma zefanitshala
XY-2027 Stainless mesh Screen for Furnitu ...
XY-2414P steel stainless ucingo tyaba ephothiweyo womnatha s ...
I-XY-D2P ye-Antique Brass Wire Mesh Grill
XY-C1B Ifenitshala emnyama yentsimbi Faka